Eziokwu COVID Ọhụrụ Mgbe ị na -efe na US bụ afọ 20 n'ụlọ mkpọrọ gọọmentị Federal maka ime mpụ ma ọ bụ imebi nkpuchi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Eziokwu COVID Ọhụrụ Mgbe ị na -efe na US bụ afọ 20 n'ụlọ mkpọrọ gọọmentị Federal maka ime mpụ ma ọ bụ imebi nkpuchi
Airlines • Aviation • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Dabere na FAA, a gbara akwụkwọ mkpesa njem njem 4,385 na -enweghị isi n'ime otu afọ na United States. N'ime nke a, 3,199 bụ akụkọ gbasara nkpuchi. Ntinye ndị ọrụ ụgbọ elu bụ mpụ dị oke njọ, mana ọ kwesịrị ịbụ nnukwu mpụ n'okpuru Iwu Patriot nwere oge mkpọrọ ruo afọ 20? Onye isi ala United States Flyers Rights President Paul Hudson echeghị otu ahụ.
Echefu ịdị na -adọpụ uche mmadụ mgbe ị na -abanye ụgbọ elu ụlọ na United States.
Ndị njem na -ajụ ụkpụrụ dị ugbu a ma na -eti mkpu mgbe ha nọ n'ụgbọ elu nwere ike gbaa akwụkwọ n'okpuru Iwu Partriot chere afọ 20 n'ụlọ mkpọrọ gọọmenti etiti.
Otu ndị na-azụ ndị na-elekọta ụgbọ elu US na-azụ ndị na-elekọta ụlọ mkpọrọ-ọ bụghị ọtụtụ mbọ mgbapụ.
Eluigwe nwere omume enyi na United States nwere ike ọ gaghị adị ka enyi dịka ha nọ na ezigbo oge PAN AM.
Federal Air Marshals na-akuziri ndị na-eje ozi ụgbọ elu ka ha ga-esi leba anya n'ihe ize ndụ na-arịwanye elu nke ndị njem na-alụ ọgụ na ime ihe ike, na-abụkarị iwu mkpuchi ihu.
Mmachibido ndị a na -amanyekarị na ụgbọ elu mba ofesi, gụnyere oche etiti mepere emepe, ịdọpụ uche mmadụ na ụgbọ elu, yana iwu ịgba ọgwụ mgbochi, anaghị adịkarị maka ụgbọ elu ụlọ US.
Ọtụtụ ndị njem ụlọ na United States na-ajụ ịgbaso iwu mkpuchi ihu n'ihi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, okpukperechi na ụfọdụ maka ahụike. Nke a na -ebute ọtụtụ ihe mere, nke a na -akọ na Federal Aviation Authority (FAA)
Flying na afọ COVID-19 bụ ihe na-enye ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri nsogbu, ma butere FAA ihe omume metụtara nkpuchi 3,199. N'iburu n'uche naanị mkpesa njem njem 4,385 gbara akwụkwọ n'otu afọ, nke a bụ ọnụ ọgụgụ dị oke elu.
Iji chịkwaa ndị njem, a tụlere ya n'ime ụlọ iji taa ntaramahụhụ metụtara ndị njem n'otu oke nhụsianya. Edebere iwu Patriot na United States na nzaghachi mwakpo ụjọ, ọ bụghị na nzaghachi nke onye njem na -eme mkpesa. Imebi iwu Patriot na -abịa mkpọrọ afọ 20 nke gọọmentị etiti.
Paul Hudson, Onye isi ala Ikike Rights, bụrụ onye onye nkwuwa okwu maka ikike ndị njem wee sị ezuru ezu.
Ikwu site na FlyersRights.org nye Kọmitii Kọmitii Ụgbọ elu maka mmụba nke ihe mberede ụgbọ elu.
Mmụba ime ihe ike na nso nso a na njem ụgbọ elu bụ nnukwu nsogbu chọrọ ngwọta. Ntị okpuru ọchịchị ga -erite uru site n'ịnụ echiche onye njem ahụ. FlyersRights.org degaara Ngalaba Ụgbọ njem akwụkwọ mkpesa iwu na August 2020 iji nye iwu iyi mkpuchi ihu na njem ikuku. FlyersRights.org abụrụla onye isi ọgbakọ na -akwado maka usoro mbelata COVID iji mee ka njem ikuku dị nchebe.
Dabere na data FAA ọhụrụ, akụkọ gbasara nkpuchi na-akọpụta 73% nke ihe niile ndị ọrụ ụgbọ mmiri kwuru na 2021. N'otu oge ahụ, ihe ndị metụtara nkpuchi agbadala, FAA nwere ihe karịrị okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ ya. nyocha. FlyersRights.org na-atụpụta azịza ndị a iji belata ọnụ ọgụgụ ọgba aghara metụtara nkpuchi na ụgbọ elu:
Mee usoro kaadị edo edo ebe a na-enye onye njem ịdọ aka na ntị ederede yana ikike izigara onye na-anya ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ elu mkpesa edere edere ka ọ bụrụ mbibi.
Gbaa mbọ hụ na ndị na -ahụ maka ụgbọ elu n'onwe ha na -agbaso ma na -eme ka iwu nkpuchi na -aga n'ihu.
Kwe ka ịdị mfe karịa inweta ahụike yana nkwarụ dị mma n'iwu nkpuchi.
Mezue usoro mbelata COVID ka ukwuu, gụnyere ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana nyocha ọnọdụ okpomọkụ. Ekwesịrị ịmanye ịdịpụrụ adịpụ mmekọrịta ọ bụghị naanị n'ụgbọ elu, kamakwa n'ọnụ ụzọ, n'oge a na -abanye, yana ebe nyocha.
Nyochaa ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi TSA site na ọkwa ọhaneze na usoro ịza ajụjụ.
Ndị ọrụ ụgbọ elu emechibido ndị njem n'ụgbọ elu pere mpe na -enweghị ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enweghị mgbochi oche dị n'etiti, enweghị ikike ikike, enweghị nyocha okpomọkụ, na enweghị nnwale COVID. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị njem na-emegide nkpuchi maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọzọ na-ahụ na enweghị nchekwa nchekwa ndị ọzọ nke ndị na-anya ụgbọ elu (ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, igbochi oche n'etiti, nlele okpomọkụ) yana enweghị mmanye na-aga n'ihu na ndị njem na ndị na-eje ozi ụgbọ elu.
A ga -achọ ịgba akwụkwọ maka batrị mgbe ihe ndị a mere ihe ike. Agbanyeghị, ọ ga -abụ nnukwu mmụba na oke mmebi nke nnwere onwe obodo ịkpọbata mpụ "nnyonye anya ndị ọrụ ụgbọ elu na ndị na -eje ozi ụgbọ elu" nke ezubere maka ndị na -apụnara mmadụ ihe na iyi onye njem nwere ihe ruru afọ 20 n'ụlọ mkpọrọ.
FlyersRights.org akwadola maka iwu nkpuchi yana usoro ahụike ndị ọzọ iji chebe ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na -eje ozi ụgbọ elu na -eme ka iwu nkpuchi dị ka o kwere mee n'okpuru ọnọdụ, ọtụtụ ndị na -eje ozi ụgbọ elu anaghị anwa ime mmanye ma ha n'onwe ha na -emebi iwu nkpuchi.
FlyersRights.org agaghị ekwu na omume otu obere pere mpe nke ndị na -eje ozi ụgbọ elu bụ maka otu ahụ niile. Agbanyeghị, dịka a ga -emerịrị ihe mmanye megide ndị njem jụrụ ajụ ikpuchi ihu, a ga -emerịrị ihe megide ndị na -eje ozi ụgbọ elu ndị a na -emebi iwu nkpuchi ma ọ bụ ndị na -emeghị mbọ ọ bụla ịmanye iwu ahụ. Ọ bụghị naanị na nke a ga -enyere aka igbochi ọtụtụ ihe ndị njem na -asọ oyi, mana ọ dịkwa mkpa maka ahụike ahụike nke ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ elu n'oge ọrịa ahụ niile.